> Resource > Mac > Sida loo badbaadi SMS ka iPhone si Mac ama PC
Sidee baan u badbaadin karo SMS ka iPhone in aan computer?
Waxaan u baahanahay si loo badbaadiyo SMS on my iPhone in computer ah. Waxaan baadhay Goobo badan, laakiinse ma ay helin hab. Ma jiraa qof wax fikrad ah in ay iga caawiso in aan badbaadiyo iPhone SMS si computer ah? Waxaan online sugayaan xal. Talo waa la mid aad u appriated doonaa.
No arrinta sababta aad u rabto in lagu badbaadiyo aad SMS ka iPhone in PC ama Mac ah, waxaad u baahan tahay in ay ku tiirsan software-saddexaad. Waa inaydaan samayn karaa iyada oo aan wax caawimaad ah oo kale. Xitaa Lugood, Saaxiibka ugu fiican ee aad iPhone, ma kaa caawin kara inaad eegista badbaadin iPhone SMS si computer ah sida file ah oo la akhrin karo. Sidaas darteed, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in la helo qalab xaq u oggolaanaysa in aad eegista dhoofin aad SMS iPhone .
Xaggee ka heli kartaa qalab noocan oo kale ah? Bal eeg halkan: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) , taas oo si toos ah iskaan kartaa iPhone, iyo ogolaado in aad eegista badbaadiyo macluumaadka ku yaal, oo ay ku jiraan SMS, xiriirada, sawiro, videos, qoraalada , wac abuse, iwm Intaas waxaa sii dheer, waxaad u isticmaali kartaa dib u soo ceshano xogta tirtiray ka iPhone marka aad si qalad ah iyaga tirtiray ka qalab aad. Just leeyihiin isku day ah in la helo hawlaha dheeraad ah oo weyn oo aad iPhone.
Save iPhone SMS si aad PC ama Mac in 3 tallaabo
Tallaabada 1. Daahfurka barnaamijka iyo xiriiriyaan iPhone
Halkan, aynu isku dayi version Windows ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka aad kombuutarka. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxba ma ahan. Waxaad weli raaci kartaa sida hoos ku qoran si uu u badbaadiyo iPhone SMS si Mac si la mid ah.
Si aad u bilaabaan la, aan bilowno barnaamijka on your computer, iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala aasaasiga ah sida soo socota.
Haddii aad u sii inay tagaan "Advanced Mode", waxaad arki doonaa suuqa kala ah sida soo socota.
In la sii wado, kaliya aad u baahan tahay si ay u riix Start Scan ku furmo suuqa haddii aad isticmaasho iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5S ama iPhone 5C ..
Wixii iPhone 4 iyo iPhone users 3GS, waxaad u baahan tahay in ay galaan hab iskaanka qalab ee. Waxaad raaci kartaa sharaxaad ku saabsan suuqa kala, ama kaliya sida ha jidka hoos ku qoran:
Marka aad u sheegay in aad si guul leh ku soo gashay hab iskaanka qalab ee, barnaamijka la bilaabaa aad ka baareyso iPhone xogta ku yaal. Hadda, guuraan tallaabada xigta.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh oo ka iPhone badbaadin farriimaha SMS si computer
Skaanka aad qaadan doonta muddo gaaban. Waqtiga sawiridda, ma barkinta aad iPhone oo ha isku xiro qalabka macruufka kale si aad u computer, si ay u helaan baaritaan lagu guulaystay. Marka sawirka dhameystiray, waxaad ku eegaan karo oo dhan SMS aad iPhone in natiijada scan sida hoos ku qoran. Iyaga Guudmar mid mid u fiirso kuwa aad rabto. Guji "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Sida aad ka arki dhinaca bidix ee suuqa, waxa kale oo aad ku eegaan karo oo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer marka aad u baahan tahay oo kale ah. Xogta halkan helay waxaa ku jira kuwa la tirtiro dhawaan iyo kuwa hadda jira ee ku saabsan iPhone. Waxaad isticmaali kartaa badhanka ugu sareysa si ay u kala soocaan: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya.